Global Voices teny Malagasy » Fitakian-Jòn’Ireo Koesiana Tsy Mizaka Izany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Oktobra 2013 3:16 GMT 1	 · Mpanoratra Mona Kareem Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Koety, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona
Ho fanamarihana ny andro iraisampirenena amin'ny tsy fampiasana herisetra, mihoatra ny 3000  ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny fiaraha-monin'ny tsy mizàka ny zom-pirenena ao Koety (Bedoon) nanao filaharambe hitaky ny zony hisitraka ny zony. Notontosaina tamin'ny 2 tao amin'ny faritra Taimaa ny fihetsiketsehana izay nombain'ny vondrona sivily ao an-toerana sy ny mpikatroka bedoon.
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny fanonganana ny filohan'i Ejipta Hosni Mubarak ireto tsy manana zom-pirenena ao Koety ireo ka izany no nanaovany fihetsiketsehana  hatramin'ny Febroary 2011. Hatramin'izany fotoana izany, niezaka ny nametraka hetsika isam-paritra mifantoka amin'ny mahaolompirenena, fanabeazana ary ny fahantrana ireo mpikatroka avy amin'ny fiarahamonina.
Nampivoatra ny fomba fifandraisana sy ny fifampiresahana politika eo amin'ny samy mpikatroka ao amin'ny vondro-piarahamonina ny tambajotran'ny fiarahamonina fa ny lehibe kokoa noho izany dia nanatsara endrika ny fitakiana izany ary nahazo mpanohana ivelany sy anatin'i Koety. Noho ny any amin'ny sehatra hafa notampenam-bava, dia manampy ny Bedoon hahango-tahiry ireo fanitsakitsahana mahazo azy ireo – ka tsy tantarain'ny mpampita vaovao be mpanaraka – ny Twitter. Ny marina, nomanina sy tarihan'ny kaonty tsy mitonona anarana antsoina hoe “Tomanim-Pirenena” ity hetsika ity ary natsangana tamin'ny volana lasa teo hanetsiketsehana ny faha-2 oktobra ary mampiasa ny teny ifankafantarana #اعتصام_2_أكتوبر , izay midika hoe hetsi-panoheran'ny 2 Oktobra [ar].
Q8voice1 : Ity kaonty ity dia tantanin'ny vondro-tanora Bedoon-Koesiana izay mijoro ho amin'ny fahamendrehana ary hitolona mandra-pahazoana ny rariny.
Na dia tsy marisika loatra amin'ny fanohanana ny tolon'ny Bedoon aza ny antoko politika koesiana, dia nitera-bokatsoa ho an'ny Bedoon ihany ny fifanenjanana misy eo amin'ny antoko mpanohitra sy ny ny manampahefana. Ny tolona politika no nahatakaran'ny vondrona politika ny maha-zava-dehibe ny fanohanana ny fitakian'ny Bedoon. Andro vitsivitsy mialoha ny fihetsiketsehana, vondrona politika 21 ao Koety no nanasonia fanambaràna  milaza ny fanohanana ny hetsi-panoherana amin'ny 2 Oktobra. Tafiditra ao anatin'ny fanambaràna ny fitakiana fototra telo: ny fananan'ny Bedoon zo hanao fihetsiketsehana milamina, ny tsy maintsy hitadiavana vahaolana farany momba an-dry zareo, ary ny maha-zava-dehibe ny fidirana an-tsehatry ny fiarahamonim-pirenena koesiana amin'ny fametrahana vahaolana maharitra.
@m_alwuhaib : Faniriako tokoa ny hahita olom-pirenena koesiana maromaro kokoa ao Taimaa rahampitso ankoatra ny mpanao fihetsiketsehana Bedoon: tokony hitazona ny fananany ny mahaolona azy ny olompirenena.
@althuwaini : Helicopter and riot forces in large number in Taima, so far they didn't storm the #Statelessness protesters.
Noho ny namelezan'ny  polisy misahana ny rotaka ireo vehivavy Bedoon tamin'ny fihetsiketsehana teo aloha dia tsy nahasahy nanao fihetsiketsehana ny ankamaroan'izy ireo. Ity sary eto ambany ity dia mampiseho balonina nasidin'ny vehivavy Bedoon nandritra ny fihetsiketsehana ho fanehoan-dry zareo ny fanohanana sy ny fijoroan'izy ireo – saingy tsy afa-nanatrika ilay fihetsiketseha-panoherana:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/10/09/52785/